Outdoor Park - Zhengzhou Prodigy fialam-boly CO., Ltd
Vahaolana ho an'ny A mahomby Toerana
Prodigy Group concentrates tanteraka amin'ny fanomezana vahaolana ny tetikasa mahomby ny fanaovana kermesy. Ny mpamorona za-draharaha no miasa akaiky amin'ny ekipa mba hamoronana tsy manam-paharoa sy ny traikefa nahafinaritra ho an'ny vahiny.
Rehefa tanteraka ny fifandraisana amin'ny lafiny rehetra sy ny tsipiriany, ny endrika 3D fandikan mamorona ny teknolojia farany indrindra fitaovana mba hanambara aminareo ny sary ho avy vokatry ny tetikasa. Io fijery mavitrika manampy mpitantana mba hanao ny safidy tsara indrindra.
Fitaovana voly Supply
Prodigy Group dia manaova fotoana mba mpanamboatra ny mitaingina mifototra amin'ny ny fifidianana avy amin'ny famolavolana. Koa, tsy ampy fitaovana customization noho ny Prodigy ny R & D mahery ekipa sy ny famokarana fitaovana maoderina.
Fametrahana & Operation Training
Ny teknisianina ekipa mahay mandeha izao tontolo izao mba hanara-maso sy mandamina ny nanangana ny mitaingina, ary hanampy anao hanazatra ny mpiasa miasa sy ny fitaovana tsara foana, ka dia ny mpanjifa dia afaka mankafy ny mitaingina azo antoka sy mahafinaritra.
Fanampiana ara-teknika no omena ara-potoana, na dia manidina teknisianina ny tany raha ilaina. Antso an-telefaonina Emergency eo amin'ny 24 / 7.Prodigy Group manome ho an'ny faritra marefo nanam fampiasana maimaim-poana.
Alohan'ny fanaterana Prodigy Group manome ho an'ny faritra marefo nanam fampiasana maimaim-poana. Rehefa avy delivery, dia manome ny 1000 piesy mba hahazo ny mitaingina hiverina hiasa raha avy amin'ny asa.